Guna-gado: “Aniga iyo Ninkaad Taqaanaan Mid Doorta” Janaraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis. – Rasaasa News
Jul 22, 2011 Guna-gado: "Aniga iyo Ninkaad Taqaanaan Mid Doorta" Jeneral Cabdiraxmaan Khaliif Dhicis.
Dhgaxbuur, Ethiopia July 21, 2011 [ras] – Dadweynaha gabalka Jarar oo isugu jira Jaaliyaha dibada, kuwa dalka iyo masuuliyiinta gabalka ugu jira dawlada degaanka iyo dawlada wadaaga Ethiopia, waxay baryahan wadeen olole ay ugu magac dareen dooro mid uun baaba,a iyo barwaaqo.
Wafti uu hor kacayo Janaraal Cabdiraxmaan Khaliif Dhis, ayaa kormeero ku tagay degmooyinka uu ka kooban yahay gabalka Jarar.
Janaraalka iyo waftigiisa ayaa kormeerkoodu ahaa sidii ay uga dhaadhicin lahaayeen dadweynaha ku nool dagmooyinka in ay la dagaalamaan nabadiidka ka jira gabalka.
Dhinaca kale waxay wafti u kuur galayeen intii ay socdaalka ku jireen nolosha dadweynaha gabalka Jarar, oo isagu ah gabalka 2aad ee ugu horumarka fiican gabalada degaanka Somalida Ethiopia.
Waxaa kale oo ay waftigu indhahooda kaga boganayeen mashaariicda horumarineed ee ay ka wado gabalka dawlada degaanka Somalida Ethiopia.
Waxayna waftigu aad ugu qushuucday is badalka nololeed ee ka jira gabalka Jarar.
Intii ay booqashada ku jirtay waftigu waxaa la tusay dadweyne badan oo ay waxyeelo u gaystay qawlaysada Maxamed Cumar Dacay [Jwxo-shiil].
Janaraal Cabdiraxmaan iyo waftigiisa ayaa aad uga xumaaday dhibaatada baahsan ee uu Jwxo-shiil, u gaystay dadweynaha gabalka Jarar. Jananku wuxuu balan ku qaaday in uu meel walba kula dagaalami doono kooxda nabad diidka ah ee Jwxo-shiil, hadii ayna joojin dhibaatada ay ku hayso shacabka.
Mar uu la hadlayey Jananku dadweynaha ku dhaqan degmada Gina-gado ayuu yidh “ama aniga oo nabad iyo nolol wada i raaca ama Ina Dacay raaca oo dabar go,a.” Dadweynaha reer Guna-gado ayaa ku dhawaaqay Ina Dacay doonimayno.
Dhinaca kale Jwxo-shiil, ayaa laga soo xigtay “cidii naga hortimaada waanu la dagaalanaa Cabdiraxmaana kuwaas ayuu ka mid yahay, aniga iyo isaguna waanu is naqaan.” Hadalkaas oo u egg in waligoodba uusan xidhiidhkoodu wanaagsanaan.
Si kastaba arintu ha ahaatee gabalka Jarar oo hore u ahaa gabalka ugu taageerada badan kooxda nabad diidka ah ee Jwxo-shiil, ayaad moodaa in uu wax ka badali doono wixii ay hore u aaminsanaayeen Janaraal Cabdiraxmaan khaliif oo isagu ah nin sumcad weyn leh.